Torohevitra momba ny fahasalamana any an-tsekoly ho an'ny ankizy: Ahoana no hitazomana ny zaza salama amin'ny taona - Wellness | Desambra 2021
Orinasa Vaovao, Wellness Lalao Fiaraha-Monina Community, Company Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Orinasa, The Checkout Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fanatanjahan-Tena Mavesatra Fanabeazana Ara-Pahasalamana News Fiaraha-Monina, Fahasalamana Wellness Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana
Tena >> Wellness >> Ahoana no hitazomana ny zanakao ho salama mandritra ny taona
Ahoana no hitazomana ny zanakao ho salama mandritra ny taona
Ny fanombohana ara-dalàna ny taom-pianarana dia misy valizy vaovao, mpampianatra vaovao - ary mikraoba vaovao. Ary amin'ity taona ity dia misy dikany vaovao tanteraka izany. Na eo amin'ny kilasy pre-K na faha-12 ny zanakao, mandritra ny taom-pianarana mahazatra, dia mandany fotoana be manodidina ny ankizy hafa izy ireo, ary manangana azy ireo amin'ny zavamiaina bitika maro kokoa avy eo. Raha jerena ny COVID-19 , distrika sekoly maro no mivadika amin'ny fianarana an-tserasera na fanokafana miaraka amin'ny fepetra fitandremana. Na hiverina any an-dakilasy ny zanakao na hijanona ao an-trano dia misy fahazarana mahasalama ho an'ny ankizy azonao ampianarina hanatanjaka ny hery fiarovan'ny zanakao.
1.Avereno ny fandaharam-potoanan'ny torimaso
Ny volana fahavaratra dia feno toby, torimaso ary fialan-tsasatra… ary ny alina be izay miaraka amin'ireo. Ara-dalàna tanteraka raha ny hatory any aoriana ny ankizy mandritra ny fiatoana an-tsekoly - na dia lavitra be aza ny fianakavianao. Na izany aza, zava-dehibe ny fananan'ny vatany fotoana hanarenana ny azy ireo fandaharam-potoana fatoriana vaovao mialoha ny hiverenana an-tsekoly.
Erin McCann, MD, monina any Chicago dokoteran-jaza , mamporisika ny ray aman-dreny hanitsy tsimoramora ny fotoanan'ny torimason'ny zanany 15 minitra eo ho eo isaky ny andro vitsivitsy amin'ny herinandro mialoha ny fianarany. Ny fanaovana izany dia mamela ny vatany hanitsy sy hiantoka azy ireo hiala sasatra tsara amin'ny taom-pianarana. Raha vantany vao manomboka ny sekoly, dia te hanampy ny zanakao hanana fandaharam-potoana fatoriana tsy miovaova ianao, izay midika hoe mitovy amin'ny ora fatoriana fito alina isan-kerinandro. Zava-dehibe koa ny fahazoan'ny ankizy sy ny tanora torimaso kalitao, izay midika fa tsy misy fitaovana elektronika (fahita lavitra, solo-saina, fitaovana filalaovana, takelaka, na telefaona) ao amin'ny efitrano fatoriana aorian'ny fatoriana.
roa.Ampianaro ny fahadiovana amin'ny tanana
Mety efa nampianarinao ny zanakao momba ny maha-zava-dehibe ny fanasana tanana mandritra ny areti-mandringana, saingy zava-dehibe ny fampahatsiahivana azy ireo ny filana fanampiny amin'ny fahadiovana alohan'ny hiverenany any an-tsekoly — fa tsy aorian'ny fandroana fandroana fotsiny. Tokony hisasa ny ankizy aorian'ny fandroana, alohan'ny hisakafoanana, aorian'ny fitsapana na ny kohaka eny an-tànany ( izay tsy tokony hataon'izy ireo akory! ), na raha napetrany tao am-bavany na teo amin'ny orony ny tanany.
Nanantitrantitra ny maha zava-dehibe ny fanasan-tanana mazoto ho an'ny mpianatra sambany i Dr. McCann satria manodidina ny zaza vaovao sy mikraoba vaovao izy ireo. ny Ivotoerana fanaraha-maso ny aretina fahazoan-dàlana hanasa amin'ny savony sy rano mandritra ny 20 segondra. Fetsy lehibe ho an'ny ankizy kely ny mampanao azy ireo hihira ny ABC hahafantatra rehefa avy nanasa ela be izy ireo.
Alao antoka fa fantatry ny zanakao ny fomba fampiasana tsara ny fanadiovan-tanana rehefa tsy azo atao ny manasa tanana. Tokony ho fantatr'izy ireo ny tsy hampidirina azy io na hikasihana ny masony amin'izany. Ho fanampin'izay, alao antoka fa mandefa azy ireo any an-tsekoly miaraka amin'ny vokatra azo antoka ianao. Vakio eto ny momba ireo mpanadio tanana farany teo.
3.Mampiroborobo ny sakafo ara-pahasalamana
Ho an'ny tanora mpianatra maro dia ampitoviny amin'ny boaty fisakafoanana vaovao ny taom-pianarana vaovao. (Ary ny fahazoana iray ho an'ny kiddos izay manao fianarana an-tserasera dia mety hanampy amin'ny fanalefahana ny fahasosorana amin'ny tsy fahazoana mahita namana mandritra ny taom-pianarana mahazatra.) Hamarino tsara fa nofenoinao safidy sakafo mahasalama io. ny Mayo Clinic mamporisika ny ray aman-dreny hiezaka hanome sakafo ara-dalàna ny zanany, dia ny proteinina, voankazo, legioma, voamaina, ary ronono. Ho fanampin'izany, tokony hametra ny tavy trans sy sakafo misy siramamy fanampiny ianao.
Mandritra ny taom-pianarana dia solika ny sakafo, koa resaho aminy ny fahazoana antoka fa mihinana mandritra ny tontolo andro izy ireo, ary ny fahazoana sakafo maraina alohan'ny handehanany any an-tsekoly, hoy ny torohevitr'i Dr. McCann.
Ny fihinanana sakafo maraina dia misy tombony ho an'ny olona amin'ny taona rehetra, indrindra ny ankizy kely. Tsy ny fihinanana sakafo maraina ihany no afaka mitazona BMI ambany, fa afaka manampy koa mampitombo ny fahatsiarovana sy ny saina. Ny zanakao dia mety ho mendrika an fandaharana sakafo atoandro anampy an-tsekoly izay manome sakafo antoandro mifandanja, tsy andaniam-bola na fandaniam-bola lafo vidy ho an'ny ankizy isaky ny mianatra na dia mianatra lavitra aza izy ireo.
Efatra.Amporisiho izy ireo hiteny
Na eo aza ny ezaka faran'izay tsara ataonao mba hitazomana ny zanakao tsy hanana mikraoba, ny zava-misy dia harary izy ireo amin'ny fotoana sasany. Ny rafitra fiarovan'ny vatana salama ho an'ny zaza dia mety [mbola hiafara amin'ny] sery 5-6 isan-taona, hoy ny dokotera McCann. Mampiahiahy ny ray aman-dreny ny amin'ireo ankizy mahazo viriosy mangatsiaka, [saingy] mahazatra azy ireo ny mahazo sery raha mbola tanora sy manomboka mianatra izy ireo.
Ampianaro ny zanakao fa raha tsy salama izy any am-pianarana dia tokony hiteny izy ireo. Raha marary ny zanakao dia tokony hijanona ao an-trano izy mba tsy hiparitaka mikraoba. Mitadiava fanampiana amin'ny dokoteran-jaza raha mampiseho famantarana ny COVID-19 .
5.Tombano mialoha ny fanahiana
Lafiny iray hafa manan-danja amin'ny fahasalamana any an-tsekoly ny fahasalaman'ny zaza, ary marina kokoa io tamin'ity taona ity noho ny hatramin'izay. Ny fampidirana an-tsekoly mandritra ny taona vaovao na voalohany dia mety mampatahotra sy mandreraka. Ny fandehanana any am-pianarana - na ny fijanonana ao an-trano - mandritra ny areti-mandringana dia vao mainka manampy trotraka izany. Ny ray aman-dreny dia afaka manampy ny zanany amin'ny fiomanana amin'izany fanahiana ary manolotra soroka hiankina.
Omano izy ireo amin'ny fanazavana ny zavatra antenainy sy ny fiovana mety hitranga rehefa mandeha mianatra. Raha azo atao dia ampitao mialoha ny sekoly sy ny efitrano fianarany. Mamporisika ny Dr. McCann hitady boky misy sary miresaka momba ny fahatsapana sy manomboka ny sekoly mba hanampiana azy ireo hiomana sy hahatakatra.
Ny ray aman-dreny sy ny mpikarakara dia tokony hitandrina mba tsy hametraka ny fanahiany manokana amin'ny zanaka satria manintona ny famantarana azy ireo amin'ny olon-dehibe izy ireo. Sorohy ny veloma farany ary andramo ny hamaritra ny fanantenana voajanahary fa hahita soa izy ireo. Ny fanararaotana tafahoatra dia mety tsy hitondra vokatra ary hampiroborobo ny fitaintainanana. Ekeo fa azonao ny ahiahin'ny zanakao, saingy manantitrantitra ny handehanany any an-tsekoly ary hifikitra amin'ny fahazarana satria mampihena ny fanahiana izany.
Na inona na inona mety hoentin'ny taom-pianarana vaovao ho an'ny zanakao dia alao antoka fa fantany fa eo ianao hanohana azy ireo ary ho loharano. Zava-dehibe koa ho an'ny ray aman-dreny ny mahafantatra fa manana loharano koa izy ireo. Na miahiahy momba ny fahasalamana ara-tsaina na ara-batana amin'ny zanakao ianao dia fantaro fa ny fanaovana resadresaka misokatra sy marina amin'ny dokoteran-jaza (na ny mpitsabo mpanampy any an-tsekoly) dia mety hahasoa anao sy izy ireo.
Ny farany ambany
Ny sekoly dia ampahany mahaliana sy manan-danja amin'ny fiainan'ny ankizy. Manome azy ireo mahazatra, fahatsapana tanjona, fahalalana, fahaiza-manao ary fiaraha-miasa amin'ny namana izany. Miaraka amin'ny fankaherezana sy ny fitarihan'ny ray aman-dreny, ny ankizy dia hiandrandra ny fankanesana any am-pianarana, hijanona ho azo antoka sy ho salama ary hiroborobo!
Ahoana ny fomba hitantanana inhaler tsara ny zanakao
Milamina ve ny fiaraha-mitondra Trulicity sy metformin?
inona no ataon'ny glipizide amin'ny vatana
inona no azonao atao hanampiana ny fitohanana
firy ny amerikanina manana diabeta karazana 2
dia az pack hanasitrana aretina sinus
fanafody mangatsiaka tsy mampatory ho an'ny orona mikoriana
inona ny akora ilaina amin'ny tums